ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : လရောင်ကိုခွေးဟောင်လို့
ကျနော် တိုင်းမဂ္ဂဇင်းက စာကိုဒီလို မြင်တယ်
လရောင်အလင်း မကျဆင်းပါ…။ဒီတော့ လနဲ့ တူတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာကို သင်တို့ သိပါသလား. စော်ကားတာ မော်ကြွားတာ ကျနော်မသိ ။ ရေးလိုက ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာ ကို မရေးသင့်.ပါ ။ သံဃာအားလုံးနဲ့လုံးလုံး အကြုံးဝင်တယ်။
ကြွက်တကောင်နဲ့ တောင်ပုံယာပုံကျီကိုမသတီ အပြစ်ဖို့ မီးလာမရှို့နဲ့…။ ဦးဇင်း ၀ီရသူ ကို ရေးချင်ရင် နံမည်တပ်ရေးပါ. သံဃာထုကို ၀ါးလုံးရှည် ချီးသုတ်မရမ်းနဲ့ 
ပြဿနာရဲ့ဇစ်မြစ် မဆန်းစစ်ပဲအပြစ်သဘော လာမပြောနဲ့…။
ဦ၀ီရသူကို မကြည်ဖြူလို့အယူလွဲမှား အကြမ်းဖက်သမားလို့
ပြောကြားချင်သလိုပြောကြားဗုဒ္ဓဘာသာကိုစော်ကားတဲ့ အပေါက်မျိုးတော့ ကျုပ်လက်မခံနိုင်.။ ဗုဒ္ဓဘာသာ မှာ အရေးအကြီးဆုံးက သရဏဂုံ သုံးပါးပါ။
ဗုဒ္ဓဘာသာ သံဃာကို ကိုးကွယ်ဆီးကပ်တဲ့အခါ သံဃာတွေအနေနဲ့ ဘဲ ကိုးကွယ်ဆီးကပ်ပါတယ်။ လူလိုမတွေးလေနဲ့ ။ လူကလူဘဲ။လူးနေတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရလိမ့်မယ်။
လူ့ အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တဲ့ သူတွေလည်း ဒီနေရာမှာခေါင်းရှောင်မနေသင့်ဘူး။
တဖက်စောင်းနင်းရေးတဲ့ မီဒီယာတွေလည်း ဒီနေရာမှာပြတ်ပြတ်သားသားပြောလိုက်မယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိပါပဲပုဂ္ဂိုလ်စွဲ ၀ါဒစွဲနဲ့ စွပ်စွဲဆိုတဲ့ မဆိုင်တဲ့အပေါက် ဂလိုင်လာမခေါက်နဲ့ လားလားမျှမဆိုင်ရေးချမဆိုင်။
မလိမ္မာ အခါခါမိုက် ၀ါးလုံးရှည်နဲ့အချွန်နဲ့လာမမနဲ့ ။
ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာစိရံတိတ်ရတု နေလိုလိုထွန်းလင်းပါစေ